Mifanamby amin’ny mponiny ny tanàna Espaniola mba hihena 100.000 kg ao anatin’ny roa taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2019 9:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, русский, srpski, čeština , Français, polski, عربي, Română , Ελληνικά, 繁體中文, Português, Español
Pulpo a feira, nahandro tena Galisiana. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i demi, CC BY 2.0
Tamin'ny volana Janoary 2018, nametraka fanamby manokana ho an'ireo mponina ao aminy ny tanànan'i Narón, Espaniola, ao amin'ny faritra misy an'i Galicia: mihena 100.000 kilao raha atambatra ao anatin'ny roa taona.
Amin'ireo mponina 39.000, mila manary 1,5 kilao eo hoe eo hatramin'ny taona hoavy ny mponina tsirairay raha te-hahatratra ny tanjona. Ireo diso ngeza na “diso matavy be” miisa 15.000 – na ny 40 isanjaton'ny mponina ao an-tanàna, araka ny tarehimarika avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana Galisiana no tena kendren'ny fanamby. Manantena ireo mpikarakara ny fanentanana fa ho very 10 isanjaton'ny lanjany farafahakeliny ity karazan'olona ity.
Natomboky ny ben'ny tanàna Marián Ferreiro niaraka tamin'ireo mpikambana 14 ao amin'ny filankevitry ny kaominina ao Narón tamin'ny 25 Janoary 2018 ny fanentanana antsoina hoe “100.000 Motivos de Peso” [adika ara-bakiteny amin'ny teny Espaniôla hoe “Antony 100.000 ho an'ny Lanja”]. Ny dingana voalohany natao tamin'izany dia ny fandanjana ireo manamboninahitry ny kaominina rehetra, izay 117.450 kilao no fitambaran'ny lanjan'izy ireo.
Nandritra ireo volana voalohany, nentanina ny fahazarana ara-tsakafo ara-pahasalamana sy ny fikarakarana ara-batana tsy tapaka avy amin'ny fanohanan'ny filankevitry ny kaominina, ireo fikambanana, sekoly ary ny vondrom-piarahamonin'ny mpitsabo.
Milaza ny dokotera Piñeiro fa nahatsikaritra zavatra mahazatra ao an-tanàna amin'ny fomba fiaina tsy tia mivoaboaka (mijanona ao an-trano) sy ny matavy be loatra. Olana roa lehibe eo amin'ny fiarahamonina ireo, izay maro loatra no diso matavy. Nilaza izy fa ny volana Aogositra 2018, nanary 2,5 kilao isam-bolana ireo mpandray anjara, na dia tsy nisy aza ny tahiry ofisialy tamin'izany fotoana izany. Nanomboka teo, dia nanana mpandray anjara mavitrika 6.000 ny fanentanana.
Noho izany fandraisana andraikitra izany, nahazo ny mari-pankasitrahana Loka Eoropeana momba ny Hatavezana be loatra 2018 tamin'ny sokajy Fandaharan'asa Fandraisana anjara Tsara indrindra teo amin'ny Vahoaka ny vondrom-piarahamonina Narón. Raha niresaka tamin'ny gazety ny dokotera Piñero, dia nanamarika fa nomena azy ireo ny loka noho ny “fandraisan'n'ny vaoaka anjara tamin'ny tetikasa iombonana izay mampitambatra ny ady sy ny fisorohana amin'ny hatavezana be loatra ary ny firaisankina.”
Raha ny marina dia manana endrika fiaraha-mientana ny hetsika. Amin'ny fihenana iray kilao isaky ny mpandray anjara, hahazo sakafo na ronono tsy mety simba ny Foibem-Piraisankina an'i Narón, “mba hampisy fepetra ara-pahasalamana mitovy [eo amin'ny mponina]”, araka ny nanamarihan‘ny ben'ny tanàna Marián Ferreiro.
Misy ihany koa ireo mpiara-miasa lasa mialoha, araka ny nolazain'ny dokotera Piñeiro:
Nahazo fanakianana maromaro ny fanentanana noho ny fifantohana amin'ny fahaverezan-danja – na dia nanantitrantitra aza ny dokotera Piñeiro fa natao indrindra hampiroboroboana ny fomba fiaina ara-pahasalamana ny fandaharan'asa.
Ohatra, nilaza i Yolanda Cambra, manam-pahaizana momba ny fahaizana ara-pihetseham-po fa zava-dehibe kokoa ny fampiharana fahazarana ara-pahasalamana noho ny fahaverezan-danja fotsiny. Nanoratra tao amin'ny tranonkalany izy hoe: